Madheshvani : The voice of Madhesh - कृषिलाई बढी केन्द्रित गरेका छौं : सूर्यनाथ मण्डल मेयर
कृषिलाई बढी केन्द्रित गरेका छौं : सूर्यनाथ मण्डल मेयर
कल्याणपुर नगरपालिका, सिरहा
० तपाइँ निर्वाचित भएदेखि अहिलेसम्म के–कस्ता कामहरू गनुभएको छ ?
— अहिलेसम्म हामीले लगभग राम्रै तरिकाले काम गरिरहेका छौं । हाम्रो मुख्य ध्यान शिक्षामा छ । शिक्षामा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेका छौं । जुन विद्यालयहरूमा पुस्तक, शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार लगायतका कमी थियो त्यसको व्यवस्था मिलायौं । यसैगरी, हाम्रो नगरपालिकामा १२ वटा वडा छन्, ती सबै वडा जोड्ने गरी नक्सांकन गरेर रिङ्गरोडको अवधारणा ल्यायौं । नगरपालिकामा पूर्वाधार विकासका लागि सडकहरू विस्तार ग¥यौं । यस्तै, नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले कृषि क्षेत्रमा बढी फोकस गरेको छु ।
० कृषिमा के–के व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
—सिंचाइका लागि नहर, कुलोको व्यवस्था, कृषकहरूका लागि ठाउँ–ठाउँमा बोरिङ्गको व्यवस्था गरेका छौं । यसपटक हामीले माछापालनलाई जोड दिएका छौं । माछापालन किसानका लागि हामीले यस वर्ष ५० लाख बजेट छुट्याएका छौं । कृषि क्षेत्रमा हामीले भारतको पञ्जाबमा जसरी खेती हुन्छ त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेका छौं । जुन ठाउँमा जुन खाद्यवस्तुको उब्जनी बढी हुन्छ त्यसैमा बढी जोड दिएका छौं ।
० स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था के छ ?
— ‘स्वास्थ्य नै धन हो’ भन्ने मूल नारालाई हामीले सबभन्दा बढी यसमा नै जोड दिएका छौं । महिला, बालबालिकाको हकमा खोप कार्यक्रमका लागि तालिमको व्यवस्था गरेका छौं । गर्भवती महिलाहरूको स्याहारसुसार तथा पौष्टिक आहारको पनि व्यवस्था गरेका छौं ।
० मेयरको रूपमा काम गरिरहँदा कस्ता चुनौतीहरू आएका छन् ?
— सुरूमा त यहाँका विपक्षी दलहरूबाट विभिन्न समस्याहरू आयो तर मैले उहाँहरूलाई भने कि म यदि नराम्रो काम गर्छु भने विरोध गर्नुस् र राम्रो काम गर्छु भने सहयोग गर्नुस् । मैले राम्रो काम गरेर देखाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता दिएर उहाँहरूलाई पनि विश्वासमा लिएका छौं । अहिलेसम्म कसैले पनि हामीलाई अवरोध गरेका छैनन् । सबैको सल्लाहअनुसार नगरपालिकामा विकासका कामहरू अगाडि बढाउँदैछौं । सुरूमा तीन महिना अधिकृतले गर्दा काम ठप्प भयो । तर, पछि सबै मिलेर सहयोग गर्नुभयो र गत आर्थिक वर्षमा हामीले ८५ प्रतिशत काम ग¥यौं ।
० गत आर्थिक वर्षमा कतिको बजेट खर्च भयो ?
— गत आर्थिक वर्षमा हामीले ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्मको बजेट चलायौं । हामीले बस पार्कका लागि पनि पैसा छुट्याएका थियौं तर त्यसको बजेट खर्च गर्न सकिएन । समयको अभावले गर्दा करिब १५ प्रतिशत बजेट चलाउन सकेनौं ।
० नगरपालिकाको कामबाट जनता कति सन्तुष्ट भएको पाउनु भएको छ ?
— हाम्रो कामबाट यहाँका जनता एकदम सन्तुष्ट छन् । विपक्षीलाई पनि मिलाएर काम गर्दैछौं । म कुनै पार्टीको मेयर होइन, पूरा नगरवासीको मेयर हुँ भन्ने भावनाका साथ काम गरिरहेको छु । हाम्रो उद्देश्य विकास हो । प्रत्येक वार्डहरूमा विभिन्न किसिमका तालिमको व्यवस्था गरेका छौं । हाम्रो नगरपालिकामा +२ सम्म मात्रै पढाई हुन्छ । प्राविधिक शिक्षाका लागि पनि हामीले पहल गरिरहेका छौं । हाम्रो प्रदेशका राज्यमन्त्री सुरेश मण्डल र प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकिशोर यादवसँग पनि यसका लागि छलफल गरेका छौं ।
० कर बढ्यो भनेर जसरी चर्चा छ, तपाइँको नगरपालिकामा करको अवस्था के छ ?
— हाम्रो नगरपालिकामा करको विषयमा कुनै विवाद छैन । जनतालाई दुःख दिएर कर उठाउनु हुँदैन र हामीले उठाएका पनि छैनौं । जनताले जति दिनसक्छ त्यहींअनुसार कर रहेको छ । हामीले कुनै नयाँ कर लगाएका पनि छैनौं । ऐलानी जग्गाहरूमा पोखरी खनाएर जनतालाई नै दिएका छौं र त्यसबाट हुने आम्दानीबाट केही मात्रामा करको रूपमा लिने गरेका छौं । हामीले लगानी गरेर त्यसबाट पैसा उठाउन खोजिरहेका छौं । जनतालाई मारमा पारेर कर उठाएका छैनौं । जनताबाट लिएको कर जनताकै लागि खर्च गरिरहेका छौं ।
० भनेपछि कल्याणपुरका जनता करबाट पीडित छैनन् ?
— यहाँ त्यस्तो किसिमका केही कुरा छैन । हामीले यति विकास गरिदिएका छौं, जनताले आफै दिन खोज्छन् । जनतालाई आम्दानी हुने भएपछि उनीहरू आफै दिन्छन् । त्यसैले हामीले लगानी लगाएर त्यसबाट आएका करलाई जनताकै लागि खर्च गर्ने गरेका छौं । अन्य नगरपालिकामा करको विवाद होला तर यहाँ अहिलेसम्म करको विषयमा कुनै किसिमका विरोध वा अवरोध छैन ।
० युवाको हकमा के छ योजना ?
— हामीले रोजगारीका लागि युवाहरूलाई आह्वान नै गरेका थियौं । युवाहरूले जुन क्षेत्रमा उसको रूचि छ, त्यसमा हामीले लगानी गर्ने भनेको छौं । बरू १० हजारको प्रति महिना तलब दिने र काममा लगाउने भनेका छौं । आम्दानी गर्नुस् र बढी भयो भने बोनसको रूपमा ती आम्दानी वितरण गर्ने भनेर भनेका छौं ।
० स्थानीय निर्वाचनपश्चात् सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भनिन्थ्यो, कल्याणपुरमा यो नारा कति व्यवहारिक छ ?
— सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा एउटा नारामा मात्र सीमित छ । सिंहदरबारका सबै अधिकार अहिलेसम्म पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । तर, हामीसँग भएका अधिकारलाई यहाँका जनतालाई पूर्णरूपमा प्रत्याभूत गराएका छौं । विकासका लागि आएका बजेटलाई हामीले पूर्णरूपमा सदुपयोग गरि नै रहेका छौं । मैले प्रत्येक वडाहरूलाई निर्देशन दिएका छौं कि जनतालाई जागरूक र सचेत बनाउनुस् ।
० निर्वाचनका बेला गर्नुभएका प्रतिबद्धता पूरा गर्दै हुनुहुन्छ ?
— हामीले जुन कुराहरूलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका थियौं, त्यहींअनुसार काम गर्दै छौं । हामीले निर्वाचनका बेला शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडकलगायतका विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौं । त्यहीं कुराहरूलाई हामीले नीति कार्यक्रम र बजेटमा राखेका छौं । हामीले आधारभूत आवश्यक्ता पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौं । ती प्रतिबद्धताहरू विस्तारै पूरा हुँदैछन् । तसर्थ, यस नगरपालिकाका जनता सन्तुष्ट छन् ।